ထုတ်ခံရဖို့နီးလာတဲ့ နည်းပြ ၊ ဇန်နဝါရီမှာ လူရှင်းမယ့် PSG တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ထုတ်ခံရဖို့နီးလာတဲ့ နည်းပြ ၊ ဇန်နဝါရီမှာ လူရှင်းမယ့် PSG တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
အဲဗာတန် အသင်း ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ ဟာ မနေ့က အရေးပေါ် အစည်းအဝေး တခု ကျင်းပ ခဲ့ပြီး နည်းပြ ရာဖေး ဘင်နီတက် ရဲ့ အနာဂါတ် အတွက် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘင်နီတက် ဟာ အဲဗာတန် ကို ရလဒ်တွေ ကောင်းအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘဲ ပရိသတ်တွေ ကလည်း လီဗာပူး နည်းပြဟောင်း ကို ထုတ်ပယ် ဖို့ လိုလား နေကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဂျာမနီ မှာ ကိုဗစ် ကူးစက် နိုင်ချေကို ထိန်းချုပ် ဖို့ အတွက် ဘွန်ဒစ်လီဂါ ပွဲတွေမှာ ပရိသတ် ၁၅၀၀၀ သာ အများဆုံး ဝင်ခွင့် ပြုတော့မှာ ဖြစ်သလို လာမယ့် ကြားရက်မှာ ကစားမယ့် ဘိုင်ယန်မြုးနစ် – ဘာစီလိုနာ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ကိုလည်း ပရိသတ် မပါဘဲ ယှဉ်ပြိုင် ရမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မနေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ယာယီ နည်းပြသစ် ရပ်ဖ်ရန်းနစ် က သူဟာ မိုက်ကယ် ကာရစ် နဲ့ ၁ နာရီ နီးပါး ကြာအောင် စကားပြောဆိုပြီး ကာရစ်ကို အသင်းမှာ ဆက်ရှိ နေဖို့ ပြောဆို ခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံး မှာတော့ ကာရစ် ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို လက်ခံ ခဲ့တယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
PSG အသင်း ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရာမိုစ့် ၊ နေမာ ၊ ဒရက်ဇ်လာ နဲ့ ဟာရဲရား တို့ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ ကစားမယ့် လန်းစ် အသင်းနဲ့ ပွဲကို ဒဏ်ရာတွေကြောင့် လွဲချော် ကြဥိးမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
PSG ဟာ ဇန်နဝါရီမှာ ကစားသမား ၇ ယောက် အထိ ရောင်းထုတ် သွားဖို့ စီစဉ် နေပြီး ဒရက်ဇ်လာ ၊ အီကာဒီ ၊ သီယို ခီဟာ ၊ ဒီရယ်လို ၊ ရာဖင်ဟာ ၊ ပါရီဒက်စ် နဲ့ ခွာဇာဝါ တို့ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ချလ်ဆီး ကတော့ PSG ရဲ့ ဘရာဇီး ခံစစ်သမားကြီး မာကွင်ဟိုစ့် ကို စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်းထပ်မံ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး ကွင်းလယ်လူ ဒီဘရိုင်းနား ၊ ဂွန်ဒိုဝမ် ၊ နောက်ခံလူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဂျွန်စတုန်း နဲ့ ကိုင်လ် ဝေါ်ကာ တို့ဟာ ဒီကနေ့ မှာ ကစားမယ့် ဝက်ဖိုဒ့် နဲ့ ပွဲအတွက် လန်ဒန် ခရီးစဉ် ကို လိုက်ပါ နိုင်ခဲ့ ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ တိုက်စစ်မှူး ဒွိုက်ဂိုင်းလ် ကို အငှား စေလွှတ်ဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေပြီး ချန်ပီယံရှစ် ကလပ်တွေ ကလည်း ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရွှေဘောလုံးဆု ကို မက်ဆီ ရရှိခဲ့မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ဟာ ဆက်လက် ထွက်ပေါ် နေခဲ့ ပါတယ် ။ အခုတဖန် ပြောဆို လာသူကတော့ လီဝန်ဒေါ့စကီး ရဲ့ ဘိုင်ယန် အသင်းဖော် ဂျရမ်း ဘိုတန် ဖြစ်ပြီး လီဝန်ဒေါ့စကီး အနေနဲ့ ရွှေဘောလုံးဆုကို ရနိုင်ဖို့ ကင်းမြီးကောက်ထောင်ပြီး ကွင်းလယ်ကနေ လှမ်းသွင်းပြရ ဦးမှာလား လို့ ပြောဆို ဝေဖန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article ရီးရဲယ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ five-a-side team မှာ ရော်နယ်ဒိုကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့ တိုနီခရူးစ်
Next Article ရွှေဘောလုံးဆုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မက်ဆီ ဘက်က ထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ ဒီမာရီယာ နဲ့ ဇာဗီ